Gandawun Shwe Bagan – Page4– Travel & Tours
June 27, 2018 8:48 am
N/ Europe Trip ( SONY တို့ပျော်လျှက် ဂန္တဝင်နဲ့ခရီးဆက်.) !
June 27, 2018 8:44 am
N/ Europe Trip ( SONY တို့ပျော်လျှက် ဂန္တဝင်နဲ့ခရီးဆက်.) ! @Dfds Cruises, Queen Of Scandinavia, From Oslo To Copenhagen
June 27, 2018 4:25 am
ခရီးစဉ်(၁) အင်္ဂလန်၊စကောတလန်၊ဝေးပြည်နယ် ၁၀ည/၁၁ ရက်ခရီးစဉ်USD4200 (+ ဗီဇာကြေး ၂၀၀ ဒေါ်လာ) DAY 1 – YANGON – LONDON DAY2– LONDON DAY3– LONDON DAY4– LONDON DAY5– LONDON – STONEHENGE – BATH – CARDIFF DAY6– CARDIFF – LIVER POOL – MANCHESTER DAY7– MANCHESTER – YORK DAY 8 – YORK […]
သင်္ကြန်အရှေ့ဥရောပ (၆) နိုင်ငံ(၁၃ည/၁၄ရက်)
February 16, 2018 8:58 am
– (ချက် ~ ဟန်ဂေရီ – စလိုဗက်ကီးယား – သြစတြီးယား – ပိုလန် – ဂျာမဏီ) USD4200 ( Early bird Discount Price USD4000)ဖေဖ၀ါရီ၁၅-ရက်နေ့ထိသာ(ထွက်ခွာရက်နှင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိရက်~ (၁၁ဧပြီ မှ၂၄ဧပြီ) (မှတ်ချက်~ Europe Countries တစ်လျောက်လုံးသုံးစွဲနိုင်သည့် ဖုံးဆင်းကဒ်များ လက်ဆောင်ပေးနေပါပြီ)။ကားပေါ်တွင်နေ့စဉ်သောက်ရေသန့်ပါဝင်ပြီး၊ဒရိုင်ဘာနှင့်Local Tour guide များအတွက် Tip များအကုန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်~ ဂန္ထ၀င်ရွှေပုဂံ ၏ Management ဖြစ်ပါ၍ တွေဝေစဉ်စားစရာမလို။ယခုပင်စာရင်းပေးမှစိတ်ချရပါမည်။) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ပရိုဂရမ်အကျဉ်း Day 1 – ရန်ကုန် -ဘူဒါပတ်စ် (O/N flight) Day2– ဘူဒါပတ်စ် Day3– ဘူဒါပတ်စ် […]
သင်္ကြန် စကင်ဒီနေဗီးယား(၄)နိုင်ငံ(၉ ည/၁၀ရက်)
February 16, 2018 8:43 am
(နော်ဝေ~ဆွီဒင်~ဒိန်မတ်~ဖင်လန်~)USD3900 ထွက်ခွာရက်နှင်ပြန်လည်ရောက်ရှိရက်~ (၁၀ဧပြီ မှ ၁၉ ဧပြီ) Casino ခန်းမ၊ဖျော်ဖြေရေးခန်းမများပါဝင်သောညအိပ် Luxury Curise စီးနင်းခြင်းများပါဝင်ပြီး၊နေ့စဉ်သောက်ရေသန့်ပါဝင်ပြီး၊ဒရိုင်ဘာနှင့်Local Tour guide များအတွက် Tip များအကုန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ Europe Countries တစ်လျောက်လုံးသုံးစွဲနိုင်သည့် ဖုံးဆင်းကဒ်များ လက်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။(မှတ်ချက်~ ဂန္ထ၀င်ရွှေပုဂံ ၏ Management ဖြစ်ပါ ၍ တွေဝေစဉ်စားစရာမလို။ ယခုပင်စာရင်းပေးမှခုံနေရာအတွက်စိတ်ချရပါမည်။) ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ခရီးစဉ်ပရိုဂရမ်အကျဉ်း —————– Day 1 – ရန်ကုန် မှထွက်ခွာ Day2– Bergen Day3– Bergen – Flam – Geilo – Oslo Day4– […]
February 16, 2018 8:35 am
(နော်ဝေ~ဆွီဒင်~ဒိန်မတ်~ဖင်လန်~Iceland)) USD 4600(Discount price USD4400)ေ ဖဖေါ်ဝါရီ၁၅-ရက်နေ့ထိEarly Bird Discount တစ်ဦးလျင် USD200 စီ Discount ရှိပါသည်။ ထွက်ခွာရက်နှင်ပြန်လည်ရောက်ရှိရက်~ (၁၀ဧပြီ မှ ၂၁ဧပြီ) �Casino ခန်းမ၊ဖျော်ဖြေရေးခန်းမများပါဝင်သောညအိပ် Luxury Curise စီးနင်းခြင်းများပါဝင်ပြီး၊နေ့စဉ်သောက်ရေသန့်ပါဝင်ပြီး၊ဒရိုင်ဘာနှင့်Local Tour guide များအတွက် Tip များအကုန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ Europe Countries တစ်လျောက်လုံးသုံးစွဲနိုင်သည့် ဖုံးဆင်းကဒ်များ လက်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။(မှတ်ချက်~ ဂန္ထ၀င်ရွှေပုဂံ ၏ Management ဖြစ်ပါ ၍ တွေဝေစဉ်စားစရာမလို။ ခရီးစဉ်ပရိုဂရမ်အကျဉ်း� —————–� Day 1 – ရန်ကုန် မှထွက်ခွာ� Day2– Iceland ( Reykjavik) ရောက်ရှိ� Day […]
သင်္ကြန်ဥရောပ (၇) နိုင်ငံ(၁၅ည/၁၆ ရက် ) ခရီးစဉ်
February 16, 2018 8:12 am
(ပြင်သစ်~အီတလီ ~မိုနာကို~ဆွစ်ဇာလန်~ ဂျာမဏီ~နယ်သာလန်~ဘယ်လဂျီယမ်~ Liechtenstein ) (USD4600, Early Bird Price USD4400) (ဖေဖ၀ါရီလ၁၅ ရက်နေ့အမှီပေးသွင်းရန်) ( Emarites Airline) ထွက်ခွာရက်နှင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိရက်~ (၁၁ ဧပြီ မှ ၂၆ဧပြီ) (Europe Countries တစ်လျောက်လုံးသုံးစွဲနိုင်သည့် ဖုံးဆင်းကဒ်များ လက်ဆောင်ပေးနေပါပြီ)။ ဗင်းနစ်တူးမြောင်းတစ်လျောက် Gondola လှေစီးနင်းခပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ကားပေါ်တွင် နေ့စဉ်သောက်ရေသန့်ပါဝင်ပြီး၊ဒရိုင်ဘာနှင့်Local Tour guide များအတွက် Tip များအကုန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်~ ဂန္ထ၀င်ရွှေပုဂံ ၏ Management ဖြစ်ပါ၍ တွေဝေစဉ်စားစရာမလို။ယခုပင်စာရင်းပေးမှနေရာခုံရရန်စိတ်ချရပါမည်။) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flight Details EK 389 12 APR RGN ~ DXB 02:10 – 05:40 EK 097 […]
Highlights If you have limited time for your visit, the following highlights are some of the things you won’t want to miss out on. If you are not inarush, you may still find the following list very useful! Parks Lake
Events It’saparty all year, or it can be if you know the places to go! Once you have arrived there will be plenty to keep you busy, but depending on the time of year, here areafew ways you can keep the party going.
PlanningaTrip Pre-departure planning is important. Here are certain things you should watch for and plan for. Visas Check with the appropriate consulate or embassy in your country to find out if you will needavisa to visit the